फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, निगमलाई घाटा कि नाफा ? - नेपालबहस
फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, निगमलाई घाटा कि नाफा ?
| २१:५३:३७ मा प्रकाशित
२२ चैत, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आज पुनः वृद्धि गरेको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । नयाँ मूल्यअनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, डिजेल र मट्टीतेलमा समेत प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ नै वृद्धि गरेको छ । नयाँ मूल्यअनुसार डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर रु १०३ पुगेको छ ।
नयाँ मूल्यसूची आज मध्यराति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ । खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको खुद्रा बिक्री मूल्य भने हाललाई यथावत् नै राखिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए ।
फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य ! ५ दिन पहिले
पेट्रोलियम पदार्थ भारततर्फ चोरी निकासी गर्ने १० जना पक्राउ २ हप्ता पहिले
खनाल- नेपाल पक्ष विद्यार्थीद्धारा पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन २ हप्ता पहिले
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न नेविसंघको माग १ महिना पहिले
चिनियाँ प्राविधिकको टोली यही चैत १९ गते नेपाल आउने १ महिना पहिले
देवीको ‘कति निष्ठुरी’मा रोशनी, सन्दीप र जेनिश १३ घण्टा पहिले
पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका एवं दिगोपना घोषणा कार्यक्रमको उद्घाटन १४ घण्टा पहिले
पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाले गरे कारागारभित्रै आत्महत्या ६ दिन पहिले
सिसीएमसी बैठक : स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुझाव ५ दिन पहिले
लुम्बिनीमा माओवादीका २ मन्त्रीले दिए राजीनामा ३ दिन पहिले
सरकारले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखायाे : नेता सिंह ४ दिन पहिले
उपमहानगरपालिकाले प्रतिकिलो फोहोर २ देखि २० रुपैयामा किन्ने ६ दिन पहिले
भारतको महाराष्ट्रमा रात्रिकालीन कर्फ्यु, रेष्टुरेन्टमा बसेर खाना खान नपाइने ३ हप्ता पहिले
वैशाख ६ र ७ गते दुई दिन भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाइने १ हप्ता पहिले
झडपमा ८ प्रहरीसहित १५ जनाको मृत्यु २ वर्ष पहिले
भान्सामा प्रयोग गरिने चक्कु अब मसाजमा २ महिना पहिले
एयर क्यानाडाको जहाज आकस्मिक अवतरण, ३७ यात्रु घाइते २ वर्ष पहिले
कोरोना आतकंले सबै त्रसित, चीनमा २५९ को मृत्यु, ११ हजार ७९१ प्रभावित १ वर्ष पहिले